GAMES TOP 5 SCARY - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Posted on Novambra 23, 2019 Author Andrew	Comments Off amin'ny TOP 5 SCARY GAMES
*fampitandremana* Niditra tao amin'ny faritra mampatahotra NetEnt Casino ianao, asongadin'ireo slot miaraka amin'ny atmosfera freakiest, ny endri-tsoratra mampientanentana indrindra ary ny karama farany ambony indrindra (mbola lalao kilalao ihany ireo!)
Miakanjo olon-dehibe, raha toa ka matahotra kely ianao, dia ekena tanteraka eo amin'ny fiaraha-monina eto, ka taomy ny mpamongady ary andao manomboka ...
1) Ny Wolf's Bane
Pablo Escobar, aingam-panahy ho an'i Narcos, dia nanome safidy roa tamin'ireo mpifaninana taminy - volafotsy na firaka.
Ny fifanarahana ao amin'ny 'The Wolf's Bane' dia tena ratsy kokoa - volafotsy na maty. Raha tsy manana bala volafotsy ianao, dia misakafo amin'ny Werewolf mahery vaika sy mandratra.
izany Hetsika 5, laharana 3 ary slot video 10 Payline manana endri-javatra mahaliana maro izay mitazona anao milalao, na inona na inona mampientanentana anao amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo.
Tena milaza zavatra tokoa izany satria ny fiavian'ny atmosfera mampientam-po dia tena manampy amin'ny fanaovana ity lalao ity ho zavatra manokana, koa miarahaba ny ekipa mahay endrika NetEnt!
Zahao ny fantsom-peo mivoaka ho anao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lalao eto ambany:
Casino momba ny basy
Betsaka ny olona handany ny Halloween tsy misy lefona - angamba amin'ny fanandramana amin'ny sipa Halloween misy hatsaram-panahy - nefa manantena izy ireo fa tsy ho faty izy ireo, toy ny kintana an'ny an'ny JackEnt's Halloween Jack.
Raha tianao ny mysticism, ny helo hounds ary decapitated loha voatavo - natao ho anao ity lalao ity. Miorina amin'ny tantara mahatsiravina momba ny Headless Horseman izany, matoatoa va gou iray hitadiavana ny làlany.
Ho an'ireo tsy dia ratsy loatra eo amintsika izay tia kilalao slot tsara fotsiny dia ity ihany no voafidy tsara amin'izany antony izany.
Halloween Jack dia 5 reel, 3 laharana slot miaraka amin'ny tsipika andoavana karama 20 ary manana endri-javatra mahaliana maro toa ny Walking Wilds, Free Spins ary manokana "Jack 'o' Lector"Mode.
Inona no tena manokana amin'ity modely ity? Eny, miasa amin'ny fanangonana simban'ny jiro ianao amin'ny reel slot, izay manome valisoa anao amin'ny 1 ny 3 mahafinaritra Wild simby:
Jiro 3 = Biby afobe mifono
Jiro 6 = Lalan'ny Faha-jaza voasambotra
Jiro 9 = Biby mpamono olona maty
3) Mpihira-dra 1 sy 2
Raha mangetaheta mena sy mafana ianao ary manandrana metaly, dia milalao lalao roa ho anao.
Ny andian-dranon'i NetEnt's Bloodsuckers dia iray amin'ny laoniny malaza ary manolotra fankasitrahana ho an'ny stylish sy ny faharatsiana madio amin'ny karazana vampire.
Ny ra Sucker voalohany dia fahombiazana eo noho eo ary lasa iray amin'ireo kilalao filokana fototra mba hilalao amin'ity fotoana amin'ity taona ity - azoko antoka fa azonao atao ny maminavina hoe!
izany Hetsika 5, laharana 3 ary andoa karama 25 lalao dia manana endri-javatra marobe ao anatin'izanyLalao bonus Vampire Hunt '.
Mandritra izany endri-javatra izany dia hiatrika paty avy amina fasana taloha ianao. Ny tanjonao dia ny fanokafana vata mba hahafahana manambara vampira matory.
Isaky ny vampira rehetra hitanao fa hahazo vola madinika ianao. Raha mahita vatokely ho solonao ianao dia ho tapitra ny lalao bonus.
Ny tratry ny ra 2
Voaozona ny Sequels, sarotra be ny manao lalao 2nd na 3rd izay tena malaza toy ny voalohany.
Eny, mety ho voaozona (ny hetaheta ny rà) ny vampires ao amin'ny mpanasa ra 2 (nefa hetaheta ny rà), fa ny lalao mihitsy dia tsy voaozona!
Miaraka amin'ny ny tahan'ny fampiverenana avo lenta amin'ny 98%, ny sary sy ny endri-javatra mihatsara kokoa - mitovy amin'ny ra mandriaka 2, raha tsy mihoatra ny lazan'ny teo aloha.
Ed-maso iray, Peggy Rotten, Polly ary ilay rajako maditra dia "ampahany amin'ny sambo sy ampahany amin'ny ekipa" manenjika ireo kodiaran'ny NetEnt's Ghost Pirates.
Navoaka tao amin'ny 2013, ity slot ity dia nitaona mazava tamin'ny andian-dahatsoratra blockbuster of The Caribbean andian-tsoratra, fa nanome ny foto-kevitra mahaliana sy sarisary mahafinaritra.
Mihazona izany anio? Raha jerena ny fomba fijery, azo antoka fa efa antitra be izany - mijery toy ny maro loko, mahafinaritra sy mampientam-po toy ny tamin'ny 6 taona lasa izay.
Misy ny tsy fahampian'ny endri-javatra manokana na dia mariky ny lalao NetEnt maoderina kokoa, noho izany dia manomboka mahatsapa ho tsy misy dikany toy ny biscuits amin'ny sambo ny lalao rehefa afaka kelikely.
Eny ary, izahay dia voafitaka eto kely. Ny slot an'i Ozzy Osbourne NetEnt dia tsy mandeha amin'ny laoniny 21st November 2019, nefa tsy maintsy nanampy izany lisitra izany izahay satria tena nampientanentana anay.
Na izany aza, i Ozzy dia mitsakotsaka ny lohan'ny vongan-tavy noho ny satana - raha tsy tafiditra ao anaty lisitry ny haino aman-jery tsy mety i Halloween izy?
Ny NetEnt dia manome voninahitra ny andrian'ny maizina miaraka amin'ny lalao manokana izay ahitana fampisehoana maro izay hitazomana anao eny ambony fiaramanidina adala mandritra ny ora maro.
Mitady lalao momba ny lalao Halloween?
Ao amin'ny NetEnt Casino dia zavatra lehibe lehibe ho antsika ny Halloween. Tianay i freakin.
Izany no nahatonga anay nanelingelina ny ekipa mpamolavola anay hamorona sary an-tsary hafahafa sy mahafinaritra ary namorona pejy misaraka natokana ho an'ny casino Halloween Bonuses.
Na mijanona sy mijery horonantsary mampatahotra ianao na mitafy akanjo hampitahorana ny mpifaninana amin'ity Halloween ity, manantena izahay fa tsara ihany ianao!
165 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny Redbet Casino
95 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny Norges Automaten Casino
145 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny Red Slots Casino
65 tsy misy petra-bola amin'ny 888 tombony Casino
20 tsy misy petra-bola amin'ny MarathonBet Casino tombony Casino
45 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny Cruise Casino
160 spins maimaim-poana ao amin'ny WickedJackpots Casino
50 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny Betrally Casino
80 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny Norges Casino
120 maimaim-poana ao amin'ny Mifosa spins tombony Casino
45 maimaim-poana ao amin'ny MyJackpot spins tombony Casino
100 tsy misy petra-bola amin'ny EuroSlots tombony Casino
160 manafaka tombony tsy petra-bola ao amin'ny Spinson Casino
120 tsy misy petra-bola amin'ny BettingWays Casino tombony Casino
55 maimaim-poana ao amin'ny Sverige spins Casino Casino
130 maimaim-poana ao amin'ny Estrella spins Casino Casino
85 maimaim-poana ao amin'ny SlottyVegas spins tombony Casino
130 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny Dragonara Casino
150 manafaka Casino tombony tsy petra-bola ao amin'ny WinTingo Casino
120 hanafaka tsy petra-bola Casino tombony amin'ny stugan Casino
70 tsy misy petra-bola amin'ny Landing Page tombony Casino
65 tsy misy petra-bola amin'ny RoyalPanda tombony Casino
90 maimaim-poana ao amin'ny Kolikkopelit spins Casino Casino
40 spins maimaim-poana amin'ny HERE Casino
0.1 1) Ny Wolf's Bane
0.3 3) Mpihira-dra 1 sy 2
0.3.1 Mpanota mpandatsa-dra
0.3.2 Ny tratry ny ra 2
0.6 Mitady lalao momba ny lalao Halloween?
3 Bilaogy tsara indrindra: